Madaxtooyada Koongo oo War kasoo saartay Safarka Farmaajo - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Madaxtooyada Koongo oo War kasoo saartay Safarka Farmaajo
Madaxtoyada Jamhuuriyadda Congo ayaa faah fahin ka bixisay booqashada Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tegay dalkaas.
Qoraal kasoo baxay madaxtooyada Koongo ayaa waxaa lagu sheegay in Madaxdweyne Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ahna guddoomiyaha Midowga Afrika uu saaka qabilay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
“Maxamed C/llaahi Farmaajo wuxuu u yimid inuu si fool ka fool ah ula kulmo Guddoomiyaha xilligan ee AU Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.. Wuxuu ahaa codsi ka yimid madaxtooyada Soomaaliya in booqashadan shaqo loo abaabulo.” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Madaxtooyada dalka Jamhuuriyadda Congo.
Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqasho an horay loo sii shaacin waxa uu ku tegay dalka Koongo,waana safarkii ug horeeyay uu dalka uga baxo tan iyo markii uu dhamaaday muddo xileedkiisa.